वैशाख ५, काठमाडौं । गत चैत १७ गतेदेखि निरन्तर बढेको बजार साताको पहिलो दिन आइतवार दोहोरो उच्च अंकले घटेको छ ।
गत चैत १७ गतेपछिको कारोबारमा नेप्से परिसूचक चैत २५ गते २ दशमलव ८५ अंकले घटेको थियो । लगातार बढेको बजार आइतवार भने १ दशमलव ३१ प्रतिशत घटेको छ । ३५ दशमलव ८९ अंकले घटेर यो दिन बजार २ हजार ६९९ दशमलव ५१ विन्दुमा झरेको हो ।
आइतवारको परिसूचकमा आएका कमिलाई आम लगानीकर्ताहरुले भने करेक्सनको रुपमा लिएका छन् । बजार लगातार बढेकाले नाफा बुक गर्नेहरु हाबी भएकाले करेक्सन भएको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।
आइतवार २ हजार ७५९ दशमलव ९० विन्दुदेखि बजार खुला भएको थियो । यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १ दशमव २८ प्रतिशत घटेर ४८६ दशमलव १६ विन्दुमा झरेको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स ६ दशमलव २९ अंक घटेको हो ।
नेप्से परिसूचकसँगै आइतवार कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचक मध्य म्युचुअल फण्डको परिसूचक शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत बढेको छ भने बाँकी समूहको घटेको छ । यसदिन व्यापारिक समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् । व्यापारिक समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३ दशमलव २७ प्रतिशत घटेको हो ।
त्यस्तै होटल्स तथा पर्यटन समूहको २ दशमलव ३५ प्रतिशत, बैंकिङको १ दशमलव ७५ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव ६२ प्रतिशत जलविद्युतको १ दशमलव २५ प्रतिशत, वित्तको १ दशमलव २३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव ३४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको १ दशमलव १९ प्रतिशत, अन्यको १ दशमलव शून्य २ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ९४ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
दोहोरो उच्च अंकले घटेको बजारमा आइतवार चार ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
महिला लघुवित्तको ९ दशमलव ९३ प्रतिशत, ज्योति लाईफको ९ दशमलव ९१ प्रतिशत, दिव्यश्वरी हाइड्रोको ९ दशमलव ४५ प्रतिशत र नेपाल हाइड्रो डेभलोपरको ९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले शेयरमूल्य बढेको हो ।
यसदिन महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. १२० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ३२८, ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता रू. ५६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ६२१, दिव्यश्वरी हाइड्रोको प्रतिकित्ता रू. १२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १३९ र नेपाल हाइड्रोको प्रतिकित्ता रू. २९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३५० कायम भएको छ ।
यो दिन गुडवील फाइनान्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत घटेको छ । उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. १४ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २६१ कायम भएको छ ।
आइतवार कारोबार रकमको उच्चता भने कायमै रहेको छ । २०७ ओटा कम्पनीको ९३ हजार ५६८ पटकको व्यापारमा रू. ८ अर्ब ८० करोड १८ लाख ३ हजार बराबरको १ करोड ९५ लाख २८ हजार ६५६ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
कारोबार रकममा सर्वाधिक हिस्सा एभरेष्ट बैंकको रहेको छ । उक्त कम्पनीको रू. ८७ करोड ६२ लाख ९९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।